कांग्रेसले किन तमाशा हेरेर बसिराखेको छ? : सांसद अधिकारी - हिमाल दैनिक
कांग्रेसले किन तमाशा हेरेर बसिराखेको छ? : सांसद अधिकारी
काठमाडौँ ११ आश्विन २०७८, सोमबार १६:२१
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका नेता खगराज अधिकारीले लगातार संसदमा बिरोध हुँदा पनि सरकार तमाशा हेरेर बसेको आरोप लगाएका छन् ।
सोमबार संसद भवनमा संचारकर्मीसंग कुरा गर्दै अधिकारीले आफुलाई लोकतन्त्रवादी भन्ने कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले संसदमा देखिएको गतिरोध अन्त्य गर्न कुनै भूमिका निर्वाह नगरेको र तमाशा हेरेर बसेको आरोप लगाएका हुन् ।
उनले सरकारले अहिले गैर जिम्मेवार प्रवृति देखाएको तर्क गरे । अधिकारीले अकस्मात संसद बन्द गरि दलीय व्यवस्थालाई समाप्त गर्ने सत्ता गठबन्धनको षडयन्त्रको जारी रुप संसदमा देखिएको धारणा राखे ।
त्यस्तै उनले सरकार आफ्नो नीति र सिद्धान्तमा विश्वस्त नरहेको आरोप लगाए ।
अधिकारीले बजेट अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयकमा कालोधनलाई सेतो बनाउने प्रावधान राखिएको भन्दै यसले अन्तराष्ट्रिय कानून आकर्षित हुने र नेपाल नै कालोसूचीमा पर्ने खतरा रहेको बताए ।
अघिल्लोअब एक-दुई दिनभित्रै सरकारले पूर्णता पाउँछ: नेता लेखक
पछिल्लोकोरोना अपडेट: आज थप १२ सय संक्रमित थपिए, ७ को मृत्यु